Tsunamis - Wikipedia
Tsunami December 26, 2004it Malé kan Maldives kessatti argamtu dha'e
Tsunami (tsoo-nah-mee) kan jedhamu kunin waves walitti-qabame demmu yoo ta'u, kan jalqabus yeroo qammi bishaani kan akka gallana dafee bakka isaa irra humna guddan yoo chocho'e dha. Tsunamin kan ka'u danda'un sababa kaneenif ta'u danda'a Earthquake, chocho'a humna gudda bishaan irraa yokan bishaan kessa, olii dhibama volcano, toka'a bishaan jalla , milliqu lafa landslides, dhibaa gudda fi yerro yalli nuclear weaponii bishaan irra. Kuni hundinu tsunami fidu danda'u. Midhaan tsunamin fiddu danda'u kan bekkamu hin dandenne hanga nama riffachisu danda'u garagaruma qaba.
Maqaan tsunami jedhu kuni kan dhufe Afaan Japan irra yoo ta'u, hikkan immo harbor dha. Akka afaan Japanitt jechi tsunami jedhu kuni akka waan tokkotti (singular) fi akka waan bayyetti (plural)itt fudhatamulle, English kessatti tsunami akka waan tokko, tsunamis immo akka waan bayye (plural)iit fudhatama. Maqaan kun kan ba'ef namotta qurxummi qabaniin yoo ta'u, akki basuu danda'anif guyya tokko qarqara bishaan isaani dhaqan "harbor"iin isaani tsunamin cacabe ergaa argani bodaa. Isaanis bishaan bana jiru (open water) kessa "wave" ni jirra jedhani hin egne ture. Tsunamin Japanese history kessatti bayye kan jirru yoo ta'u, kan galma'e bekkamu hanga 195 ni ta'a.
Tsunamin qarqara gallana (offshore) irratti olii dherina wave bishaani (amplitude yokan wave height) diqqa kan qabu yoo ta'u wavelength dherra (Km dhibaan lakka'amani qabu), walumma galatti kanaf tsunamin osso hin bekamin gallana kessani dabru. Tsunamin tidal wave jedhamani bekkamu kunis, yoo lafa dhaqabani waan cimma ta'anii, tide (olka'u fi gaddi bu'u bishaan) gudda qabattu. Kuni immo "tide" bishaan irra kan gargari itti gorun, bishaan irratti "wave" salpha kan bubeen demmu yoo qabattu kun immo waan nami yerro hunda gallana kessatti argu danda'u dha. Haa ta'u malee tsunamiin "tide" (olka'u fi gaddi bu'u bishaan) wajjin wal-fakkena homma waan hin qabnef oceangrapherotni akka maqqa "tidal wave" jedhu akka hin fayyadatamne dhowwu.
An accented declivity less in the side-sea makes the waves to lose force, attenuating tsunami
A bigger depth in the hillside plays the waves for top, amplifying its power
Volcanic eruptions inject tons of wash in the oceanic soil, generating devastadoras waves
Submarine earthquakes dislocate the crust oceanic, pushing the water mass for top
A gas bubble appears in the deep one of the ocean, with the same effect of an uncommon explosion
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsunamis&oldid=22419" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 8 Bitootessa 2013, sa'aa 00:32 irratti.